Soomaali Dilaa ah Oo Midi ku dilay gabar Maraykan ah Oo maxkamad la soo taagay | shumis.net
Home » News » Wararka » Soomaali Dilaa ah Oo Midi ku dilay gabar Maraykan ah Oo maxkamad la soo taagay
Soomaali Dilaa ah Oo Midi ku dilay gabar Maraykan ah Oo maxkamad la soo taagay
Nin Soomaali ah oo la yiraahdo Isaaq Cabdinuur oo 35 jir ayaa la soo taagay Maxkamad Woodbury County District Court ee magaaladda Siyokis ee Gobolka IOWA ee dalka Marayanka kadib, markii lagu soo oogay dacwad la xiriirta inuu dilay Gabar Maraykan oo la oran jirey Korneliya Isteed oo 43-jir ahayd.
Eedeysanaha ayaa la sheegay inuu gabadhaasi oo ay is-jeclaayeen dilay bishii June 23-dii ee sannadkan, kadib, markii uu dhex maray muran.
Ninkan ayaa beeniyey inuu dilkan geystay balse Dokumentiyo la hor keenay Maxkamadda ayaa waxay Baarayaasha ku sheegeen inuu muran dhexmaray Lamaanahan, kadibna uu feer iyo Toorey la dhacay gabadhii sidaasna ay ku geeriyootay.
Kaaliyaha Xeer-ilaaliyaha Gobalka Woodbury, James Loomis ayaa sheegay in Eedeysanaha lagu samaynayo Baaritaan Madax-bannaan ee dhinaca fal-dembiyeedka, waxaana loo diray inuu soo baaro Dr. Tim Kockler oo ka hawlgala Xarunta baaritaanadda Dembiyadda iyo Maydadka.
Eedeysane Isaaq Cabdinuur ayaa la filayaa in mar kale Maxkamadda la soo taago bisha Janaayo 26-da ee sannadka soo socda ee 2016-ka, waxaana uu muteysan karaa hadii dembigan lagu helo xabsi inta noloshiisa ka dhiman uu ku jiri doono.
Title: Soomaali Dilaa ah Oo Midi ku dilay gabar Maraykan ah Oo maxkamad la soo taagay